Cele News Archives - Page 46 of 195 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 46)
တစ်ချိန်တုန်းက ထက်ထက်ရဲ့ကြော်ငြာလေးနဲ့ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ရွှေဆိုင်တစ်ခုနဲ့ ဒီနေ့မှာ Live လွှင့်ရောင်းချသွားမယ့် ထက်ထက်မိုးဦး
November 11, 2020	Cele News
ထက်ထက်ကတော့ တစ်ချိန်တုန်းက ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာဘုရင်မတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သလို ပရိသတ်ရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာလည်း ထက်ထက်ရဲ့ကြော်ငြာလေးတွေက ရေပန်းစားခဲ့တာ အမှန်ပါ။ လတ်တလောမှာလည်း အွန်လိုင်း Live ဘုရင်မတစ်ပါးအဖြစ် အောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်သိမ်းပိုက်လာတဲ့ထက်ထက်ကတော့ စိန်ရွှေရတနာဆိုင်တွေ၊ ကားတွေ ၊ အိမ်ရာတွေ စတဲ့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုတောင် သူ့ရဲ့စန်းနဲ့ သိန်းပေါင်း သောင်းချီအောင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ (၂၀၀၀) ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ပရိသတ်တွေစွဲစွဲမြဲမြဲကြိုက်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်ရဲ့ကြော်ငြာလေးဖြစ်တဲ့ ပန် ပန် ပန်ပန်ပန် ဆိုတဲ့ ရွှေစင်ရတနာရွှေဆိုင်လေးနဲ့ လက်တွဲရောင်းချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၂၀၀၀) ခုနစ် ဝန်းကျင်ကစလို့ ရွှေစင် နဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ထက်ထက်မိုးဦး နဲ့ ရွှေစင် ပန် ပန် ပန် ပန် ဆိုပြီး …
သမီးလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး အွန်လိုင်းကနေသင်ယူကာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က Certificate တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ
ချစ်သုဝေကိုတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့တင်မကဘဲ ပရဟိတအလုပ်ကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း သိကြမှာပါ။ သမီးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချစ်သုဝေကတော့ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်း ပရဟိတအလုပ်တွေကို မနေမနားကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ပညာရေးမှာလည်း ကြိုးစားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “COVIDအတွင်းမှာ ရတနာတွေစုဆောင်းမိတယ်….ပညာ နဲ့ ကုသိုလ် 1stwaveမှာဟန်တပြင်ပြင်နဲ့ မလုပ်ခဲ့ရဘူး…2ndwaveမှာ ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ကွယ်..စာတွေနဲ့ ၁၃နှစ်ကြာဝေးခဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာ ဒီပိစိ course certificate လေးရဖို့ Assignment တွေရေးရတော့ ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိနဲ့.. လက်လျော့ချင်စိတ်တွေတဖွားဖွားနဲ့ပါပဲ…Topic က ကိုယ့်အတွက် သမီးလေးတွေအတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံပညာရေးအတွက် အတွေးအမြင်လေးတွေရမှာမို့ ဇွဲမလျော့ခဲ့ဘူး…တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ပိုပိုအဆင်ပြေလာသလို ကိုယ့်ကိုယ် ကို တွေးမြင်နေတဲ့အရာတွေပါပြောင်းလဲလာတယ်..ယုံကြည်မှူလည်းပိုရှိလာသလို အားလည်းပိုတက်လာတယ်…Trezaလို့ ကလေးအမေတွေကိုလည်း အကျိုးရှိတဲ့ ကိုယ့်အတွက်သင့်တော်မယ့် courseလေးတွေကို ရအောင်တက်စေချင်တယ်..ဖြစ်အောင်လုပ်ရင် ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ် … စိတ်ရဲ့ထက်သန်မှူပဲလိုတာပါလို့..တနေ့ တနေ့ …
ချစ်သက်တမ်းရက်ပေါင်း(၁၅၀၀) အတူတူဖြတ်သန်းပေးခဲ့တဲ့ မြတ်အတွက် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Ah Boy
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော် Ah Boy နဲ့မြတ်ရတနာကျော်တို့ကတော့ သမီးလေး Scarlett နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားကြသူတွေပါ။ နှစ်ဦးစလုံးအနုပညာအလုပ်တွေသိပ်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပေမယ့် Our Travel Diaries Page လေးကနေတဆင့် ပရိသတ်အတွက် အမျိုးမျိုးသောဗွီဒီယိုလေးတွေ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ Ah Boy ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ သီချင်းတွေပြန်လုပ်လာခဲ့ပြီး မောင်ချိုနဲ့အတူတူ သီဆိုထားတဲ့ အငွေ့အသက်များ သီချင်းလေးက ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေးရေပန်းစားခဲ့သလို ဒီနေ့မှာတော့ သူဖန်တီးထားတဲ့ နောက်ထပ်သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ထပ်မံချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ မြတ်အတွက် Anniversary Gift အနေနဲ့ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ကာ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သီချင်းလေးကိုတော့ ကျေးကျွန် ဆိုပြီး အမည်ပေးထားပါတယ်။ 1500 Days …. သူမတစ်ယောက်တည်းကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ချစ်လာခဲ့တာ …
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာဂီတလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်လာသူပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အနုပညာဖန်တီးမှုအသစ်တွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်း သီချင်းအသစ်တွေထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အကြိုက်တွေ့ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖြူဖြူက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပေးပို့ခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ “ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ပို့ပေးကြတဲ့လက်ဆောင်တွေ၊ ပန်းချီကားတွေ၊ မုန့်မုန့်တွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် May God bless you all more abundantly!” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားမျှဝေထားတာပါ။ ဖြူဖြူကတာ့ မကြာသေးခင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ အလွမ်းပုံပြင် သီချင်းထဲက ပုံရိပ်လေးကို ပုံတူဖန်တီးထားတဲ့ ကျောက်စီပန်းချီကားချပ်လေးနဲ့ ပုံတူပန်းချီလေးတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ ဒီလိုလက်ဆောင်တွေအပြင် အခြားလက်ဆောင်တွေအများကြီးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့် ကြည်နူးနေတဲ့ပုံပါပဲနော်… Source : Phyuphyukyawthein
ရွှေရတုတိုင်အောင် ရွှေလက်တွဲမြဲခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးအတွက် အမှတ်တရစကားလေး မျှဝေလာတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ၊ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်းရွှေရတုပြည့်နှစ်လေးပါ။ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်စိုးမြတ်သူဇာကတော့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်းနှစ်(၅၀) ပြည့်လေးမှာ မေမေက ရေးခိုင်းလို့ဆိုပြီး အရွှန်းဖောက်ကာ မင်္ဂလာအမှတ်တရစကားလေးကို မျှဝေလာပါတယ်။ ကနေ့က အဖေ နဲ့ အမေ ရဲ့ ရွှေရတု နှစ်ပတ်လည်နေ့ပါ…. အဖေ့လို မိသားစု ကို တန်ဖိုးထားပီး ချစ်မြတ်နိုးတတ်တဲ့ သူရဲ့ သားသမီး တွေဖြစ်ခွင့်ရတာ ကျမ တို့ မောင်နှမ လေးယောက် အတွက်ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်သလို အမေကလည်း ဒီနေ့ထိ အဖေ့ကို သူ့အနားမှာအတူတူ ရှိနေအောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သည့် အစွမ်းက လည်း ကျမ တို့ ညီအမတွေ အတွက် ရင်သပ်ရူမော …
(၄၃)ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာ ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်
November 10, 2020	Cele News
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့မင်းသမီးချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေတစ်ဆင့် လူသိများလာတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆရာမလေးစံမြန်းအဖြစ်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယမုံကတော့ ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၄၃)ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာ ပါဝင်အားဖြည့်ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲက ပုံရိပ်အချို့ကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ Forever Group မိသားစုကြီးလည်း ဒီထက်မကအမြဲတမ်းလှူတန်းသာသနာပြုနိုင်ပါစေ လို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးထားပါသေးတယ် ။ ယမုံရဲ့ ပရိသတ်ကြီးကတော့ ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာ ပါဝင်အားဖြည့်နေတဲ့ သူမအတွက် သာဓုတွေခေါ်ဆိုခဲ့ကြသလို စိတ်ထားကောင်းပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယမုံတစ်ယောက် ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတွေပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ယမုံကိုချစ်တဲ့ ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း (၄၃)ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာ ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင် …
စလုံးကချစ်သူ သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့ G-family အဖွဲ့ဝင် အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံး သိပြီးဖြစ်မှာပါ ။ မကြာသေးမီကမှ ချစ်သူနဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခဲ့ပြီး ကိုဗစ်ပြီးရင် မင်္ဂလာပွဲ ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ အင်္ကျီလေးကို ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ် ။ အာဘလက်နဲ့ တောမထွက်ခင် ဒီနေ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ ဈေးဗန်းခင်းလိုက်ပါတယ်နော် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူသူ့ရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်းဝမ်း အတွက် 21 North MM က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် 9one Logo နဲ့ G-Family အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပါ အထူးစပါယ်ရှယ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ကွာလတီအကောင်းစားဂျက်ကက်အမဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ …
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအဆိုတော်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်သလို နှစ်ပေါင်းများစွာပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရယူထားနိုင်ဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ အဆိုပိုင်းမှာပါရမီအပြည့်ပါသလို ထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်အပြင်အဆင်တင်ဆက်မှုတွေကြောင့်လည်း နာမည်ကျော်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဖြူဖြူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်စတိုင်တွေကိုတေ့ာ ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ အမိုက်စားဝတ်စုံတွေနောက်ကွယ်က ဒီဇိုင်နာကိုပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဒီနေ့ကတော့ ချစ်တို့ကို ဟင်ခနဲ ဟာခနဲ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူရဲ့ Myanmar Idol ဝတ်စုံဆန်းတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာကော်ရီးသျှတ္တရ Designer Sha Tra ရဲ့မွေးနေ့ပါရှင်… Happy Birthday, Sha Sha yay!!မွေးနေ့ရှင်ကကိုယ်တိုင်မွေးနေ့ကိတ်လေးလာပို့ပေးလို့လည်းကျေးကျေးပါနော်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာသျှတ္တရကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာတွေထဲကတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတူ ဖြူဖြူကတော့ ပွဲတွေမှာအမိုက်စားဖြစ်ပြီး ပြောစမှတ်တွင်တဲ့ ဖက်ရှင်များစွာကို ဝတ်ဆင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူ့ရဲ့ဖက်ရှင်တွေကို ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိကြလားနော်… Source : …
ပရိသတ်အချစ်တော် ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဘင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ Live လွှင့်ဈေးရောင်းရင်း အတော်လေး အဆင်ပြေအောင်မြင်နေတာပါ ။ အခုလို သီတင်းကျွတ်ကာလမှာလည်း ချစ်ရတဲ့ ဆရာသမားနဲ့ အနုပညာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ဂါရဝတရားရှေ့ထားပြီး လိုက်လံ ကန်တော့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။ သရုပ်ဆောင် ဇော်ဇော်အောင်ကလည်း နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် တို့ ဇနီးမောင်နှံ လာရောက်ကန်တော့ ကြကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ သီတင်းကျွတ်မှာ သက် နဲ့ သားနဲ့ ရုတ်တရက် လာကန်တော့ကြတော့ အံသြ ဝမ်းသာ ဖြစ်ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါ ။ ဇော်ဇော်အောင်ကတော့ အခုလို လာကန်တော့ကြမှ သူ့ကိုယ်သူ …
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲအပြီး ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးထွက်ရှိလာတဲ့ နှင်းအိအိဝင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နှင်းအိအိဝင်းကတော့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့သူဖြစ်သလို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတခရီးလမ်းပေါ်လျှောက်လှမ်းကာ မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ပြိုင်ပွဲမှာကတည်းက အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကိုယ်ပိုင်သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ကို ချပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ အရမ်းဆွေးသွားစေမယ့် နှင်းအိအိဝင်းရဲ့ ချစ်ခဲ့ပါသော်လည်း သီချင်းလေးကိုတော့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အမြန်ဆုံးချပြနိုင်ဖို့အတွက် ကိုဗစ်ကာလမှာ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အသံသွင်းခဲ့ရကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှင်းအိအိဝင်းကတော့ အခုလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာစေဖို့ Video Call နဲ့ Guide လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ တီချယ်ထရေစီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ နှင်းအိအိဝင်းရဲ့သီချင်းလေးကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲပြီးလို့ အချိန်ကြာမှ ထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် စောင့်မျှော်နေသူတွေအတွက် တကယ်ကိုမျှော်ရကျိုးနပ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ.. …